Tameelay, Author at Tameelay
Articles by Tameelay
March 17, 2020 Tameelay 0
လူတွေမှာ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း ဆိုတာ ရှိတယ်။ ချစ်ရင် ချစ်မယ်၊မချစ်ရင် မုန်းမယ်။ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ဆိုတာ အစွန်းနှစ်ခုပဲ။ စိတ်ဓာတ်မှာ balance မဖြစ်လို့ အစွန်းနှစ်ဖက်ထွက်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်။ အဲဒီ အစွန်းထွက်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလွတ် မြောက် ချင်လို့ရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ဥပေက္ခာ ပွားရမယ်တဲ့။ ဥပေက္ခာဆိုတာ […]
အခုခေတ်လည်း ခလေးပေါက်စလေးတွေ bright ဖြစ်တာရှိတယ်။ ပညာဆိုတာ ဒီဘဝမှာ သင်မှ နောက်ဘဝမှာ အရည်အချင်းက လိုက်လာမှာ။ တခြားဟာနဲ့ မတူဘူး။ ပညာကြီးမားအောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် တော်တော်များများက ဖြစ်လေရာဘဝမှာ ပညာတတ်ဖို့ဆိုပြီး ပညာဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဆိုပါစို့၊ ပညာဒါနဆိုပြီးတော့ သူများ ပညာသင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးတာတွေ၊ ဆီမီးလှူပြီးတော့ […]
မေ တ္တာ ဆိုတာ ပွား ရတာ..
မေတ္တသုတ်ကို နေ့စဉ်ရွတ်လို့ရှိရင် အန္တရာယ်တွေ ကင်းတယ်လို့ဒီမေတ္တာသုတ်မှာ ပြဆိုထားတဲ့စကား တစ်လုံးမှ မပါဘူး။ သို့သော် အများက ဒီအတိုင်းပဲ ယုံကြည်နေကြတယ်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပြောရ မယ်ဆိုရင်`တို့လူတွေက သောက်ဆေးကို လိမ်းဆေးလုပ်နေကြတယ် ´တဲ့။ သောက်ရမှာကို မသောက်ဘဲနဲ့ လိမ်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနေလို့ရှိရင် အကျိုးသက်ရောက်မှု အား နည်းမယ်၊ […]
ကိုယ့်စိတ်ကို သိအောင် ကြိုးစားပါ
မြတ်စွာဘုရားက ” သူများစိတ် မသိလျှင် နေပါစေ ကိုယ့်စိတ်ကို သိအောင် ကြိုးစားပါ” တဲ့။ သူများစိတ်သိဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ များသောအားဖြင့် လူတွေက သူများအကြောင်း သိဖို့ ကြိုးစားကြတာ များတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းတော့ ကိုယ်သိတယ် ထင်တာကိုး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိအောင် ကြိုးစားပါ။ အထူးသဖြင့် […]
မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ၊မှန်ကန်တဲ့စေတနာတွေ ရှိရမယ်။ လူမှာ Intention လို့ခေါ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရတယ်။ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည် စေတနာကောင်း၊.စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းမယ်။ ကံကောင်းလို့ရှိရင် အကျိုးပေးကောင်းတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလုပ်လိုက်တာကစပြီး ကုသိုလ်အဆက်ဆက်ကြောင့် နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်အကျိုးတရားဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ ရှေးတုန်းက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဘုရားတစ်ဆူနဲ့ ကြုံတဲ့အခါမှာ […]
လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာမေတ္တာထားချင်ရင်ကောင်းကွက်လေးတွေကို ရှာကြည့်၊ဆိုးကွက်တွေ သွားမကြည့်နဲ့။ လူဆိုတာ အကောင်းအဆိုး ရောနေတာပဲ၊ ဘယ်သူမှ အကောင်းချည်း မရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှ အဆိုးချည်းလည်း မရှိဘူး။ ကောင်းကွက်ကိုရှာ မေတ္တာကိုပွားဆိုတာ “ယောနိသော မနသိကာရ”ကို ပြောတာ၊ ကောင်းကွက်ကို ရှာမတွေ့နိုင်ရင်မေတ္တာ မပွားနိုင်ဘူး။ မေတ္တာမပွားနိုင်ရင်ချက်ချင်း ဘယ်သူ ဒုက္ခဖြစ်လဲဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့နှလုံး ပူလောင်ခံရတယ်။ […]
ကိုယ်ပိုင်တယ် ကိုယ်ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားရင် ခံစားကြရမယ်….
ဘဝတစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံကြုံကြိုက်ရတဲ့ သားသမီး၊ဇနီး ခင်ပွန်းတွေကို လူတွေက ကိုယ့်အပိုင်လို့ ထင်နေကြတယ်။ တကယ်က ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တောင် ကိုယ်မပိုင်ပါဘူးနော်။ အကြောင်းသင့်တုန်းလေးမို့ ပေါင်းဆုံနေကြရတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းမသင့်တဲ့တစ်နေ့ ခွဲကြရမှာပဲ။ ဒါက ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ၃၁–ဘုံလုံးဖြစ်နေကြတာ။ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက သတ္တဝါတွေအတွက် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှသာ […]
March 16, 2020 Tameelay 0
မင်းသားလို့ ထင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ အဆုံးသတ်တွေပြီးသွားတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ်သာ ဗီလိန်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်လောက်ဆိုးခဲ့တာဆိုတာတွေပဲ ပြန်ပြီး အမှတ်ရကြတာများပါတယ် ။ နေရာတကာ စေတနာတွေ မေတ္တာတွေ သိပ်ကို ရှေ့တန်းတင်တတ်လွန်းခဲ့ဖူးတာပေါ့ ။ ဘယ်အရာမှာမဆို ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်လေး ကြည့်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တာလေ ။ […]
အရင်ပြုံးဖို့ အရင်လို ပျော်နေဖို့လိုပါတယ် ။ မလိုချင်တဲ့အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အခါ လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ ဘဝမှာ ပျော်အောင်နေဖို့ ခက်ခဲလာတတ်တယ်လေ ။ အရင်လိုပဲ ပြုံးနေပေမယ့် အရင်လို အသက်မပါတော့ဘူး ။ဒဏ်ရာတွေကိုဖုံးပြီးပြုံးတဲ့အပြုံးက အနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်နေသယောင်ပေါ်နေတတ်တယ်လေ ။ ကိုယ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ဘ၀ ကိုယ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဘဝကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အသိဆုံးပါ။ နာကျင်နေပါလျက်နဲ့ […]
မေတ္တာဖြင့်ချည်သောလက်တွေမြဲစေသား. . . . . လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတာ အသွင်လဲ မတူကြသလို စိတ်ဓာတ်ချင်းလဲ မတူနိုင်ကြဘူး အမိဝမ်းတစ်ခုတည်းက ထွက်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှ အချင်းချင်းတောင် တူဖို့မလွယ်ကူတာ တခြားသူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ဆို ပို့လို့တောင် မလွယ်ကူဘူးလေ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်လလောက် မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ လွယ်မယ်လို့ ထင်လား […]
သင့်မှာညီမ ဒါမှမဟုတ် အစ်မ ရှိရင် သူတို့ကိုချစ်ပါ၊ တန်ဖိုးထားပါ၊လေးစားပါ